Tag: shoemoney | Martech Zone
Njodzi nhatu dzeKubatana kweKushambadzira uye Maitiro Ekuzvidzivirira
Muvhuro, April 24, 2017 Chipiri, April 25, 2017 Robert Glazer
Iyo yekudyidzana indasitiri iri nuanced. Kune vatambi vazhinji, zvidimbu, uye zvinofamba zvikamu. Nepo mamwe eaya ma nuances ari ayo anoita yemubatanidzwa modhi kuti ive yakasarudzika uye yakakosha, senge yekubatanidza muripo kumhedzisiro, kune zvimwe zvisinganyanyodiwa. Zvakare ndezvekuti, kana kambani isingazive nezvavo, vanoisa panjodzi yekukuvadza yavo. Kuti makambani atore mukana wese uye vadzokere mukudyara kuti chirongwa chekubatana chinokwanisa
Chipiri, Gunyana 16, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ichi chingave chinyorwa chinoshamisa chakapihwa chokwadi chekuti bhurogu yangu iri mukudzikira kudiki mukuverenga. Ichokwadi ndechekuti ini ndoziva chiri kukonzeresa, asi ini handina nguva izvozvi yekudyara kuti ndiimise. Hapana kunetseka, zvakadaro, ini ndichazvishandura nekukurumidza! Naizvozvi, ndanga ndichifunga zvakawanda pamusoro penzira idzo makambani nevanhu vanogona kutora kutora pfungwa dzevezera ravo, tarisiro, uye / kana vatengi pa
Yakakura Hunhu Traffic yeMutengo weShati
Mugovera, June 14, 2008 Chishanu, February 12, 2016 Douglas Karr
Kana iwe usati waitika pane blog yaJeremy Shoemoney, iri rakakura blog kutevedzera. Jeremy zvakare ane chirongwa chikuru chinonzi Mahara Shirt Chishanu. Zvinogona kutora mwedzi mishoma kuti Jeremy apfeke hembe yako, chirongwa chakakurumbira. Ndinoda kutaura zvishoma kune zvinokonzeresa kutora chikamu muchirongwa chakadai. Zviri pachena kuti blog yaJeremy haina chekuita neNavy Veterans; zvisinei, iko kusvika
Kutenda, squidoo! (Shoemoney cherekedza)
Muvhuro, Kukadzi 26, 2007 China, Gumiguru 29, 2015 Douglas Karr
Muvhiki ino ndakavhundutswa nevamwe pachena blog blog spam ... iyo yekuenda URL yaive chaiyo squidoo lens. Kana paine munhu mumwe chete mukondinendi iyi asingakwanise kumira Spam, anogona kunge ari Seth Godin, munyori wePermit Marketing uye muvambi weScidoo. Tarira kune Spammers: Squidoo ingangove isiri nzvimbo yakanakisa yekumisikidza shopu. Chero zvakadaro, ini ndakangodonhedza squidoo katsamba kangu kekuti ndakaongorora lens iri mubvunzo ndikanzwa kuti paivepo